पहिलो पटक हङकङमा देखियो कुकुरमा पनि कोरोना भा’इरस ! – Life Nepali
पहिलो पटक हङकङमा देखियो कुकुरमा पनि कोरोना भा’इरस !
एजेन्सी। पहिलो पटक हङकङमा घरमा पालेको कुकुरमा समेत को’रोना भा’इरस कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएको छ । बुधबार हङकङका स्वा’स्थ्य अधिकारीहरुले को’भिड–१९ संक्रमित मा’निसबाट कु’कुरमा न्यून तहको संक्रमण भएको पुष्टि गरेका हुन् ।यसअघि जनावरबाट मा’निसमा सं’क्रमण भएको भनिए पनि मा’निसबाट ज’नावरमा सं’क्रमण भएको यो पहिलो घटना भएको विज्ञ’हरुले बताएका छन् ।पो’मरेनियन प्रजातिको कु’कुरको गत शुक्रबारदेखि नै प’रीक्षण भइरहेको थियो । सुरुमा ए’कदमै न्यून’ रुपमा सं’क्रमण भएको बताइएको थियो ।
कुकुरको ना’क वा मुख कोभिड–१९ संक्रमण हुन’ सक्ने सिँगान’ तथा र्‍या’लजस्ता चिजको’ सम्पर्कमा पु’गेको हुन’ सक्ने स्वा’स्थ्य अधिकारीहरुले’ जनाएका छन् । सं’क्रमण दे’खिएपछि उ’क्त कु’कुरलाई क्वा’रेन्टाइनमा रा’खिने पनि साउथ चा’इना मोर्निङ पो’स्टले जनाएको छ । त्यस्तै को’भिड १९ अर्थात् को’रोना भा’इरसको’ उद्ग’मस्थल चीनमा गएकाे २४ घण्टामा क’सैकाे पनि ज्या’न गएकाे छैन । पछिल्लाे २४ घण्टामा १२ जना नयाँ बिरामी थपिएका छन् । चीनमा स’ङ्क्रमित र ज्या’न गु’माउनेको स’ङ्ख्या घटे पनि विश्वका अरु देशमा सङ्क्रमित-सँगै ज्या’न गुुमाउनेको स’ङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।
कोरोना भा’इरसका का’रण गएको २४ घण्टामा विभिन्न देशमा’ थप ५२ जनाको ज्या’न’ गएको छ भने दुई हजार’ एक सय ५९ जना नयाँ सङ्क्रमित भेटिएका छन् ।५१ हजार चार सय ४९ जना उपचारपछि’ घर फर्किएका छन् ।९५ हजार एक सय ८० जनामा सङ्क्रमण देखिइसकेकाे छ । अहिलेसम्म तीन हजार दुई सय ५४ जनाको ज्या’न गइसकेको छ । कोरोना भा’इरसको स’ङ्क्रमण अहिलेसम्म ८४ देशमा फै’लिएको’ छ । काे’राेनाकाे स’ङ्क्रमण ब’ढेसँगै इटलीले आजदेखि १० दिनसम्म सबै स्कुल ब’न्द गर्ने घो’षणा गरेको छ ।
यस्तै सिरी ए फुटबलसहित व्यवसायिक फुटबल खेल एक महिनाका लागि बन्द गरिएकाे र पछि खेलाउने निर्णय गरिएको इटली सरकारले जनाएको छ । को’रोना भा’इरसका का’रण इटा’लीमा एक सय सात ज’नाको ज्या’न गएको, बीबीसीले जनाएको छ । यसअघि को’रोनाको उद्ग’मस्थल चीनसँगै ह’ङकङ, जा’पान, इराक र संयुक्त, अरब इमिरेट्स यूएईले, यसअघि, नै स्कुल ब’न्द गर्ने निर्णय, गरिसकेका छन् । यस्तै फ्रान्सले, पनि, एक सय २० भन्दा धेरै स्कुल बन्द ,गरेको छ । यसबाट लाखौं विद्यार्थी, प्रभावित भएका छन् ।सुरुमा रु’घाखो’की र उ’च्च ज्व’रो आ’उनु, शरीरका, मासु दुख्न, थाल्नु, अनि बि’स्तारै सास, फेर्न गाह्रो, हुनु कोरोनाका लक्षण हुन् ।
Previous सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान बन्द गर्यो !
Next ७० मुलुकमा कोरोना भा’इरस फै’लिदा, विश्व स्वास्थ्य संगठन नै आ’त्तियो, दियो, यस्तो चे’तावनी